Ndeapi marudzi einishuwarenzi yemotokari aripo? | Ehupfumi Zvemari
Encarni Arcoya | 08/06/2021 11:29 | Yakagadziridzwa ku 14/06/2021 10:58 | Inishuwarenzi
Inishuwarenzi yemotokari inyaya iyo chero muridzi wemota anoziva chaizvo. Nekudaro, kana iwe uine kambani panoshandiswa mota kana mamwe marudzi emakambani emotokari, anotakura inishuwarenzi yakakosha, inonzi kambani mota inishuwarenzi.
Asi ndeipi inishuwarenzi? Ndeapi marudzi aripo? Zvingaverengerwa sei? Pane zvimwe zvakwakanakira pane zvakajairwa mota inishuwarenzi? Tinokutsanangurira iwe pazasi.
1 Chii chinonzi kambani mota inishuwarenzi
2 Mhando dzekambani inishuwarenzi yemotokari
2.1 Inishuwarenzi nezvikepe
2.2 Inishuwarenzi dzakasiyana dzezvikepe zvakafanana
3 Maitiro ekuverenga mota inishuwarenzi
4 Bhenefiti yekambani mota inishuwarenzi
Chii chinonzi kambani mota inishuwarenzi
Kazhinji, kambani inishuwarenzi yemotokari inzira yekuchengetedza izvozvo mota ine nyanzvi yekushandisa, ndiko kuti, inoshandiswa kuita basa. Izvo hazvina kufanana neinishuwarenzi yakazvimiririra, semuenzaniso iyo yauinayo pamotokari yako kana mudhudhudhu, nekuti hauishandisi kubasa, asi pakufamba, kuzorora ... mune mamwe mazwi, kushandisa pachako.
Rudzi urwu rweinishuwarenzi rune mamiriro akasiyana pane ayo anozivikanwa uyezve akasiyana zvinodiwa Izvo zvinoenderana nerudzi rwunosarudzwa (sezvo paine sarudzo dzinoverengeka). Asi usati wataura nezvemhando dzeinishuwarenzi yemotokari kumakambani, iwe unofanirwa kuziva ndedzipi mota dzinogona kuve inshuwarisi neichi. Kazhinji, iwe unogona kuve nechokwadi:
Zvemota dzekambani. Ndokunge, zvemota dzevapfuuri dzinoshandiswa nevashandi vako kana mamaneja emakambani kugona kuita basa. Pano iwe unogona zvakare kusanganisira maveni kana marori nekuti iwo mota dzinoshandiswa pakuendesa, kutakura, technical service ...
Zvemachini. Tiri kutaura nezvemotokari dzemuchina, dzinogona zvakare kuve neinishuwarenzi.
Mumarori nemumotokari dzinorema. Idzo mota idzo, nekuda kwemamiriro avo, dzinoda inishuwarenzi chaiyo kwavari.
Mune fleets. Chekupedzisira, iwe une kambani mota inishuwarenzi ye "fleets", uchinzwisisa seiyi yakawanda kwazvo mota mukambani. Semuenzaniso, mukambani yebhazi, vanogona kuve nevakawanda vekuvhara nzira dzakasiyana.
Mhando dzekambani inishuwarenzi yemotokari
Mukati meinishuwarenzi maitiro emakambani mota, tinowana maviri marudzi:
Ivo ndeimwe yesarudzo inonyanya kusarudzwa nemakambani sezvo ichizivikanwa nekubatanidza mota dzese dzekambani muchibvumirano chimwe chete. Nenzira iyi, mhando yeinishuwarenzi yakanangana nekuvhara inosarudzwa, kuve nekukwanisa kusarudza wechitatu bato, yakawedzerwa yechitatu bato kana yakazara ngozi njodzi
Uye kufukidza kupi kwakanyanya? Zvakanaka, anogona kunge ari mahwindo, kuba, moto ... Chokwadi ndechekuti makambani anopiwa mukana wakakura wekuchinja nekuti zvazviri ndezvekugadzira inishuwarenzi inovhara zvinodiwa nemotokari imwe neimwe.
Sezvakasiyana, ndizvo izvo vese vanoita zvemota vanofanirwa kuvimbiswa, ndiko kuti, kune wese munhu anogona kuishandisa pane imwe nguva. Kunyangwe mumafirita emakambani ekuhaya mota, zvakafanana zvinoitwa.
Inishuwarenzi dzakasiyana dzezvikepe zvakafanana
Imwe sarudzo pakati pemhando dzeinishuwarenzi kumakambani ndeyekusimbisa mota yega yega maererano nekushandisa kwayo. Vangave vari mukati mezvikepe zvakafanana, asi imwe neimwe yaizove nemamiriro ayo uye kufukidzwa.
Es yakafanana chaizvo neinishuwarenzi yega, asi iine zvimwe zvakanakira, kunyanya kana iri huwandu hwakawanda hwemotokari kuve inishuwarenzi. Ehezve, mune dzakawanda zviitiko vese vanobata mutemo uye muridzi weinishuwarenzi ndivo "munhu" mumwe chete, izvo zvinogona kunge zviri muzita rekambani.
Maitiro ekuverenga mota inishuwarenzi
Asati, kuti uverenge inishuwarenzi yemotokari mune inishuwarenzi, waifanirwa kuenda kuhofisi kuitira kuti vataure pamusoro pesarudzo dzakasiyana, zvivharo uye vakuitire fungidziro yemutengo weinishuwarenzi iyoyo. Nekudaro, matekinoroji matsva akaita kuti zvikwanise kusiya izvi kumashure uye kukuita iwe kuti uite maitiro iwe pachako.
Kuti uzviite, unofanirwa pinda webhusaiti yeinishuwarenzi inokufarira uye ivo vanozove nefomu kana chikamu icho, kuburikidza nematanho mashoma aunotarisa mhando yeinishuwarenzi yaunoda, mota uye kufukidzwa, ivo vanokupa iwe yekupedzisira mhedzisiro (dzimwe nguva pachiratidziri, dzimwe nguva muemail yako) nemutengo unofungidzirwa. Semuenzaniso, mota inishuwarenzi inogona kuverengerwa pano.
Zvinoitwa nevamwe kukufonera nefoni kuti vakuraire uye uone kana uchifarira inishuwarenzi. Muzviitiko izvi, ivo vanogona dzimwe nguva kunatsiridza mutengo wavakakupa pamhepo, kana ivo vanochinjika. Chero zvazvingaitika, kuverenga uku ndekwechinguva, nekuti gare gare unogona kuongorora kana kusabatanidza kuwedzera kufukidza uye, nekudaro, uine yakazara yakazara mota inishuwarenzi.
Bhenefiti yekambani mota inishuwarenzi
Kufunga kuve nekambani inishuwarenzi yemotokari, ingave iri yezvikepe kana kuti kwete, zvinogona kutungamira kune mamwe mabhenefiti kukambani. Uye hazvina kufanana kuchenesa mota imwechete pane kuzviita kumotokari makumi maviri. Inishuwarenzi vanowanzo ipa chakakosha kuchengetedza kwehuwandu hweinishuwarenzi ichaitwa chibvumirano, dzimwe nguva zvinosvika makumi mana muzana kana kudarika pamutengo uye zvinoenderana nekufukidzwa kunoitwa chibvumirano.
Vanogona kuva nezvivharo zvakawanda seinishuwarenzi yega; kana kuve nekufukidzwa kwakawanda nekuti mashandisiro anopihwa mota yakazvimiririra haana kufanana nemotokari yekambani.
Inishuwarenzi inochinja-chinja. Inishuwarenzi yekambani inochinjika zvakanyanya nekuti inoenderana nehunhu hwebhizinesi, huwandu hwemotokari uye mamiriro ainofanira kunge aine (kana paine inishuwarenzi yevatyairi vakasiyana, rubatsiro rwemumugwagwa, mota yekutsiva ...).
Maitiro akagadziriswa. Makambani haawanzo kuita kambani imwe chete inishuwarenzi yemotokari; ita akati wandei. Uye manejimendi inoitwa, kunze kwekusara, mune imwechete mutemo.
Ivo vanogona kubvumidzwa online. Kuonekana kwekunge uchifanira kutora nguva yekuenda kuhofisi; ikozvino unogona kuzviwana online uye kubata zvese.
Kugadziriswa kweinishuwarenzi. Vanoisa pamashopu avo einishuwarenzi emashopu echiratidzo, kana ekambani yeinishuwarenzi pachayo, nenzira yekuti, kana paine matambudziko nemotokari, vanoenda kumashopu akasarudzika ane zvikamu zvekutanga.
Iwe haufunge here kuti zvakakosha kuti uzive nezve kambani mota inishuwarenzi uye kutanga kusevha?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Inishuwarenzi » Ndeapi marudzi einishuwarenzi yemotokari aripo?